Ahịa anọghị n'ịntanetị | Ozi ECommerce
Ahịa nke efu
Encarni Arcoya | | Marketing
Tupu Ịntanetị dị n'ụlọ ọ bụla, azụmahịa, ọfịs, wdg. Azụmaahịa ịntanetị adịghị, ụlọ ọrụ enweghị ọnụnọ na ịntanetị. Kedu ka e si bulie ha na mgbasa ozi? Ọfọn site na ahịa na -anọghị n'ịntanetị.
Ọtụtụ na -atụle nke ahụ, na ịre ahịa n'ịntanetị, azụmaahịa, ụdị, wdg. ha anaghịzi achọ usoro ịre ahịa n'ịntanetị. Nnukwu ndudue. Chọpụta n'okpuru ihe ahịa ịntanetị na -anọghị n'ịntanetị, ihe kpatara o ji dị mkpa yana uru ọ nwere ike iwetara eCommerce.
1 Kedu ihe bụ ịre ahịa n'ịntanetị
2 Kedu uru nke ịre ahịa n'ịntanetị maka eCommerce
3 Atụmatụ ahịa na-anọghị n'ịntanetị na-arụ ọrụ maka eCommerce
3.1 Ọkwa na mgbasa ozi
3.2 Nkwalite nye ndị na -eme ihe ike
3.3 Soro na mmemme
3.4 Ahịa okporo ụzọ
3.5 Mgbasa ozi n'èzí
Kedu ihe bụ ịre ahịa n'ịntanetị
Ahịa anọghị n'ịntanetị bụ nke ndụ, nke emegoro, nke a na -eme, n'ụlọ ahịa obodo, n'obodo, obodo kwụụrụ onwe ya na obodo.
ya omume a na -eme na -enweghị mkpa ọnụnọ ịntanetị, mana ndị a na -eme na ndụ n'ezie. Nzube ya? Ịgakwuru onye na -azụ ma ọ bụ onye ahịa, site na ozi, ịmara akara na / ma ọ bụ ngwaahịa, ịnye ọrụ, wdg.
Maka nke a, a na -eji ihe nkwado na ire ahịa dị iche iche dịka akwụkwọ mmado, broshuọ, mgbasa ozi ebipụtara, kaadị azụmahịa ... Mana mgbasa ozi na mgbasa ozi, akwụkwọ ozi, okwu ọnụ, wdg ga -abanyekwa.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ ụzọ ịkwalite azụmahịa na -ejighị kọmputa ma ọ bụ njikọ netwọkụ.
Kedu uru nke ịre ahịa n'ịntanetị maka eCommerce
Ebe ọ bụ na ịre ahịa n'ịntanetị dị n'egbugbere ọnụ onye ọ bụla, a na -ekwukwa na, "ọ bụrụ na ịnọghị na ịntanetị ọ dịghị onye na -ahụ gị", a na -eche na ịre ahịa na -anọghị n'ịntanetị anwụọla. Na eziokwu bụ na mba. N'ezie, ọ na -amalite ịtụte.
N'agbanyeghị eziokwu na a na -emepụta ọtụtụ eCommerce na Spain, nke ọnụnọ ya bụ ntanetị, enwere nnukwu uru nke iji omume na mpụga ịntanetị. Dị ka ọmụmaatụ:
Iji rute ndị ọrụ na -ejighị ịntanetị. Okwu doro anya bụ ma ọ bụrụ na ị nwere eCommerce nke a raara nye ngwaahịa maka ndị agadi. Ndị ahịa gị nwere ike bụrụ ndị okenye ahụ, mana ọtụtụ anaghị eji ịntanetị ma ọ bụ mara ka esi erute ibe gị. Ya mere, atumatu lekwasịrị anya na ịre ahịa n'ịntanetị ga-enwe mmetụta karịa nke ịntanetị.
Na -eru ọtụtụ. Were ya na ị kpebiri itinye ọkọlọtọ n'akụkụ okporo ụzọ. Dị ka ị maara, ọtụtụ nde ụgbọ ala na -agafe n'ime ya otu ụbọchị, ọbụna karịa ma ọ bụrụ na anyị na -ekwu maka isi obodo ma ọ bụ isi obodo. Nke ahụ bụ, nde mmadụ ga -ahụ gị. Ọ bụ nnukwu mgbasa ozi na -enweghị isi, ee, n'ihi na ị ruru ọtụtụ mana ọ bụghị ha niile ga -abụrịrị ndị ahịa ị lekwasịrị anya. Ugbu a, ha ga -amata gị? Obi abụọ adịghị ya, ọbụlagodi mgbe ha enweghị mmasị, ha ga -ama ka esi amata gị ma ọ bụrụ na ha hụ gị n'ịntanetị.
Mgbasa ozi na -anọghị n'ịntanetị ka dị irè, ọ na -efukwa ntakịrị. Ọ bụghị otu ahụ ka ọ dị na ịntanetị, nke na -adịwanye ọnụ karịa ma ọ na -esiri ya ike iru ndị mmadụ.
Enwere ịbịaru nso ka ukwuu, ọkachasị n'ihi na etinyere mmekọrịta na ndị ahịa, na -enyere aka idobe ha ma nwee ọmịiko na ụdị mmadụ ma ọ bụ otu ndị mmadụ. Nke ahụ na -enyere aka, n'etiti ihe ndị ọzọ, ịzụta karịa.
Atụmatụ ahịa na-anọghị n'ịntanetị na-arụ ọrụ maka eCommerce
Ugbu a ị matara ihe a niile, ị nwere ike iche na, maka eCommerce, nke enweghị ọnụnọ anụ ahụ n'obodo gị, ma ọ bụ ụlọ ahịa ebe ọ nwere ike ree, ọ nweghị isi. Ma n'ezie ọ bụghị otú ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ị na -echeta mgbasa ozi Aliexpress? Ị hụla ya na ịntanetị, kamakwa na telivishọn, n'akwụkwọ akụkọ ... Ị nwere ụlọ ahịa na Spain? Ọ bụghị ruo n'oge na -adịbeghị anya na ka ekwuputala ya.
Eziokwu nke ịpụ na mgbasa ozi, itinye onwe gị na ndụ ndị mmadụ na-ebi kwa ụbọchị na-eme, n'ikpeazụ, n'ụzọ na-apụtachaghị ìhè, ha na-achọ gị na ịntanetị. N'ezie, ka mma mgbasa ozi nkwado ka mma nsonaazụ ya.
Kedu omume ndị a na -anọghị n'ịntanetị ka enwere ike ime na eCommerce?
Ọkwa na mgbasa ozi
Nwere ike telivishọn, redio, akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ akụkọ, wdg. Medialọ mgbasa ozi ọdịnala na, n'agbanyeghị na echere na ha nọ n'ọgba aghara, ọ bụghị otu a ma ọ bụrụ na ịhọrọ nke ziri ezi, ha nwere ike rụọ ọrụ nke ọma maka gị.
Nkwalite nye ndị na -eme ihe ike
Eziokwu nke ịnwale ihe, mana ọ bụrụ na ị nwekwara ike nweta mgbasa ozi, ọ bụghị na ịntanetị, mana n'èzí, ọ ka mma.
Dịka ọmụmaatụ, were ya na onye na-emetụta ihe ị zitere t-shirt nke edere ụlọ ahịa gị n'ịntanetị wee tinye ya ka ọ pụọ n'okporo ụzọ.
Ee, ọ siri ike ịchịkwa. Ma ị nwere ike nzọ na obere ụlọ ọrụ mgbazinye (nke ụgbọ ala, skuuta, wdg ma tinye eCommerce gị dịka mgbasa ozi). Site n'iji ya ndị mmadụ ga na -ebugharị mgbasa ozi gị ebe niile.
Soro na mmemme
Ejibeghị nke a nke ukwuu na eCommerce, mana ugbu a, ahụla na ha dị oke mma ma na -eme Azụmahịa ahụ bụ "mmadụ" ịhụ ndị nọ n'azụ ụlọ ahịa ịntanetị ndị ahụ. Yabụ ọ bụrụ na enwere ihe omume metụtara mpaghara ị na -arụ ọrụ, tinye ego na itinye ego na ha.
Ọ bụ ụzọ iji mee ka amara gị na mpụga netwọkụ na ebe enwereghị ọtụtụ ndị na -eme ya, ọ nwere ike ịdị irè karịa.
Ahịa okporo ụzọ
Ọ mejupụtara ahịa n'okporo ámá, ọ bụkwa ya na -arụ ọrụ karịa. Ihe e ji mara ya bụ ịkwalite azụmahịa, ika ma ọ bụ ngwaahịa site n'ịrụ ọrụ n'okporo ámá. Dịka ọmụmaatụ, ịgba egwu, ọkpụkpụ, graffiti, wdg.
N'ịbụ onye na -egbu maramara, ọ bụghị naanị na ị na -akpata mmetụta na onye ọ bụla hụrụ ya. Kama, ka anyị na -ejikọ ekwentị, ndị mmadụ na -edekọ ya ma tinye ya na ịntanetị. N'ụzọ dị otu a ị na -enweta mgbasa ozi na -anọghị n'ịntanetị mana, n'edighi ya, yana n'ịntanetị.
Ọ bụ nnukwu ngwa ọgụ na ihe a na -erigbubeghị nke ukwuu.
Mgbasa ozi n'èzí
Dịka ọmụmaatụ, na ngere, n'ime kanopi, eyiri n'elu ọkụ okporo ụzọ, wdg. Ha bụ ezigbo echiche n'ihi na, ọ bụrụ na etinye ya n'okporo ụzọ ma ọ bụ ebe ọrụ juru, ndị mmadụ ga -ahụ gị.
Ọ bụrụ na ị tinyekwara url nke azụmahịa gị, koodu QR ma mepụta ọmarịcha ma na -achọ ịmata ebe a na -agba ndị mmadụ ume ịmatakwu, a ga -ekwe gị nkwa na ị ga -abịa.
N'ezie, dị ka ọ dị na mbụ, ọ bụ ụdị nke sonye na ntanetị na n'ịntanetị, na ọ mara mma nke ukwuu. N'ezie, kpachara anya maka na ọ na -adịkarị ka ndị mmadụ na -ele ala anya, yabụ mgbe ụfọdụ ọ ka mma ilekwasị anya ala ma ọ bụ gaa n'ihu karịa elu.
Dịka ị pụrụ ịhụ, n'agbanyeghị na ọ nwere ike iyi ihe nzuzu, ịre ahịa n'ịntanetị na -aga n'ihu na -arụ ọrụ. Maka ọtụtụ azụmaahịa, ọ ka mma n'ịntanetị. Yabụ, mgbe anyị na-ewepụta atụmatụ azụmaahịa, anyị ga-eburu n'uche omume ndị enwere ike ime na-enweghị mkpa ịntanetị, ya bụ, ihu na ihu, gị gị, ma ọ bụ n'etiti ndị ahịa na ndị ọrụ. Ị nwere ajụjụ ndị ọzọ gbasara ịre ahịa n'ịntanetị? Jụọ anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa nke efu
Etu esi achọ ihe onyonyo na Google
Ndụmọdụ iji jikwaa ngwaahịa ecommerce nke ọma